ငါချစ်သောဆောင်းပါးများနှင့်သင်ဘာကြောင့်စဖွင့်သင့်သည့်အကြောင်း - ဆောင်းပါး Porn On Your Brain
ဆောင်းပါးများငါချစ်နှင့်အဘယ်ကြောင့်သင်ကဂျာနယ် Start သင့်သ
[အမျိုးသားများအတွက်] ဆောင်းပါးများငါချစ်နှင့်အဘယ်ကြောင့်သင်ကဂျာနယ် Start သင့်သ
ပထမဦးစွာပယ်, ငါသည်အမကြာသေးမီကရှာဖွေတွေ့ရှိ သူရဲက်ဘ်ဆိုက်၏အနုပညာ, သူတို့အဘို့အဆောင်းပါးတန်ချိန်များ ယောက်ျား သူတို့ဘဝတိုးတက်အောင်ကြိုးစားနေသည်။ ငါဒီဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုအရမ်းကြိုက်တယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အမျိုးသားစာဖတ်သူတွေအတွက်ပါ၊ သူတို့ကအရမ်းအသေးစိတ်ကျတယ်၊ တချို့ကငါ့ကိုအများကြီးကူညီပေးခဲ့တယ်။ ငါ pornfree အတွေ့အကြုံကိုသုံးပြီးညစ်ညမ်းမှုကိုရပ်တန့်ရုံသာမကလူကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်လာစေဖို့အတွက်အာရုံစိုက်ခြင်း၊ အာရုံစိုက်ခြင်းနှင့်စွမ်းအားဆိုင်ရာဆောင်းပါးအချို့ကိုရှာဖွေပြီးဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်၏အဓိကရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်တစ်ခုမှာ (ကျွန်ုပ်၏ဘ ၀ ၌အရာအားလုံးကိုပျင်းစရာကောင်းပြီးအာရုံစူးစိုက်ရန်ခက်ခဲသောပုံများဖြစ်စေသော) ညစ်ညမ်းမှု၊ ရုပ်မြင်သံကြား၊ ဗီဒီယိုဂိမ်းများ၊ ကျပန်းဝက်ဘ်ဆိုက်စသည်တို့ကဲ့သို့သောအနုတ်လက္ခဏာပြင်းထန်သောလှုံ့ဆော်မှုများကိုဖယ်ရှားရန်ဖြစ်သည်။ ကျောင်း၊ ငါဝါသနာပါချင်တဲ့ငါ့ဝါသနာ၊ စစ်မှန်တဲ့အမျိုးသမီး၊ ဘဝ၊ အရာအသစ်တွေနဲ့ကြံ့ခိုင်ရေး။
ငါဘာကိုမသိဘူးဆိုရင်ငါအကြိုက်ဆုံးဆောင်းပါးအားလုံးကိုစာရင်းမချခင် Evernote သငျသညျကျိန်းသေကထုတ်စစ်ဆေးဖို့လိုတယ်, ပါ! အစဉ်မပြတ်ငါကငါ့ကိုမအကျိုးရှိမည်ဟုဘယ်လောက်သိ appstore ပေါ်မှာမြင်မှာမဟုတ်ဘူး။ ပြီးနောက် အဲဒီအကြောင်းဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုဖတ်ရှုခြင်း, ငါက download လုပ်ပေးရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်ငါကြိုက်တယ်! ကျွန်ုပ်၏အိုင်ဖုန်းနှင့်ကွန်ပြူတာပေါ်တွင်၎င်းကို၎င်းတို့စပ်ကြားစည်းညှိသည်။ 'နောက်ပိုင်းတွင်ဖတ်ရန်' အမျိုးအစားများအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်အင်တာနက်ပေါ်မှတစ်ခုခုကိုဖတ်ရှုရန်အချိန်မရပါက၎င်းကိုသုံးပါ Web ကိုညှပ် နောက်ပိုင်းတွင်သင်ကြည့်ရှုရန်ထိုဆောင်းပါးသည်သင်၏ Evernote အကောင့်တွင်ဖြစ်သည်။ ငါဖတ်ပြီးသောဆောင်းပါးအားလုံးနီးပါးအတွက်၎င်းကိုကျွန်ုပ်အသုံးပြုသည်၊ ကျွန်ုပ်နှစ်သက်သောသူများအတွက်ကျွန်ုပ်၏ Commonvern Book ဖိုဒါတွင်ကျွန်ုပ်၏ Evernote အကောင့်တွင်နောက်မှထပ်မံဖတ်ရှုရန်။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ဂျာနယ်၊ ကြံ့ခိုင်ရေးမှတ်တမ်းနှင့်အကြံဥာဏ်များ၊ ပန်းတိုင်များ၊ မှတ်စုများ၊ လုပ်ဆောင်ရန်စာရင်းနှင့်ကျွန်ုပ်၏ဝါသနာများအတွက်ဖိုင်တွဲအားလုံးကို Evernote တွင်ပြုလုပ်သည်။
အဘယ်ကြောင့် Society ကလူငယ် Boys ပျက်ကွက်နေသည်
ငါဒီဆောင်းပါးဟာကွာရှင်းမှု၊ ညစ်ညမ်းမှု၊ အထီးကျန်မှုစံနမူနာတွေ၊ ဒါဟာအခြေခံအားဖြင့်အခုထိငါ့ဘဝအကြောင်းပါ။
Willpower အပိုင်း 1 ကြီးများ၏အင်အားစု
Willpower အပိုင်း 2: သင့် Willpower လျော့နည်းသွားသည်ကိုမည်သို့
Willpower အပိုင်း 3: ဘယ်လိုဒါဟာထိန်းသိမ်းရန်သင့်ရဲ့ Willpower နှင့် 20 နည်းလမ်းများကိုခိုင်ခံ့စေဖို့
အာရုံစူးစိုက်မှု, ကျေးဇူးပြု. ! အဘယ်အရာကိုတိုင်းက Man အာရုံစိုက်အကြောင်းသိအပ်
သင့်ရဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုလေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်: သင့်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုခိုင်ခံ့စေတော်မူမည်ဒါက 11 စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှု
တစ်ဦး Pushover ဖြစ်ခြင်း Quit: အခိုင်အမာ Be လုပ်နည်း
ဂရိတ်အမျိုးသားများ၏လျှို့ဝှက်ချက်: တမင် ရည်ရွယ်. အလေ့အကျင့်
အဘယ်ကြောင့်? သင်၏အတွေးများနှင့်ရည်မှန်းချက်များကိုရေးမှတ်ရန်ထူးဆန်းသောအစွမ်းထက်သောအရာရှိသည်။ သင်အိပ်တော့မည့်အချိန်တွင်ဘာလုပ်သနည်း။ မနက်ဖြန်အတွက်ကျွန်ုပ်၏ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်နှင့်နေ့ရက်ကိုစဉ်းစားလေ့ရှိသည်။ ထို့နောက်မနက်ဖြန်နိုးသောအခါကျွန်ုပ်၏ရည်မှန်းချက်များကိုမေ့သွားပြီးတစ်နေ့တာကိုဖြုန်းတီးပစ်လိမ့်မည်။ နောက်တဖန် ဒါကြောင့်ငါလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ကိုပေးမယ့်ဖုန်းအက်ပလီကေးရှင်းအချို့ကိုစမ်းကြည့်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ဒါကအလုပ်မလုပ်ဘူး၊ ငါသာငါ့လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ကိုဖြတ်လိုက်ရင်ကျန်တစ်နေ့လုံးပျက်စီးသွားလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်ငါဂျာနယ်တစ်စောင်ကိုစတင်ခဲ့ပြီးငါမနက်ဖြန်ပြီးမြောက်ချင်တဲ့အရာတွေကိုစစ်ဆေးရမယ့်စာရင်းကိုလုပ်ပြီးနောက်တစ်နေ့သွားရင်သူတို့ကိုပြန်စစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကကိုယ့်ကိုယ်ကိုအလုပ်များနေစေပြီးသင်၏စိတ်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများကိုရှောင်ရှားရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ဤအရာသည်ကျွန်ုပ်အတွက်များစွာကောင်းမွန်ခဲ့ပြီးယခုကျွန်ုပ်ပိုမိုလုပ်ဆောင်နိုင်ပြီဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ဂျာနယ်မှတ်တမ်းများကို Evernote သို့ကျွန်ုပ်ရေးသည်ကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်ဖုန်းတွင်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။
ငါ Template ကိုသုံးပါ:
ယခု အဘယ်သို့ငါအခုအချိန်မှာအဘို့အ thankful ငါ?